Indlela yokuqwalasela ukhuseleko lweakhawunti yakho ye-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ukuseta ukhuseleko lweakhawunti yakho ye-Instagram linyathelo elibaluleke kakhulu lokugcina lonke ulwazi olugcinileyo apho. Ukuqwalasela ukhuseleko lweakhawunti yakho kuya kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo:
Fumana icandelo lokhuseleko
Kuya kufuneka ungene kwiakhawunti yakho ye-Instagram ukuze ngokusebenzisa iziqinisekiso ngokulandelelana.
Kuya kufuneka uye kwicandelo loqwalaselo lweakhawunti yakho:
Ukuba ufikelele kwiphepha lewebhu, cinezela nje umfanekiso weprofayile yakho. Xa usenza njalo, i-tab iya kuboniswa apho uya kufumana khona "ukuseta" njengokhetho lokuqala.
Ukuba ungene kwiselfowuniKuya kufuneka ufake iprofayile yakho ngokusebenzisa i icon ngenxa yesi sizathu. Inokufumaneka phezulu konxibelelwano ukuba usebenzisa ingxelo epheleleyo ye-Instagram App okanye ngasezantsi ngasekunene ukuba usebenzisa uhlobo olukhanyayo.
Nje ukuba ufike kwiprofayili yakho, khangela i-icon enemigca emithathu ethe tyaba, ethi, xa ucinezelwe, ibonise itab, apho uza kufumana khona "useto" ukuqala ukhetho ukusuka phezulu ukuya ezantsi.
Emva kokungena kuqwalaselo, uya kuba nakho ukufumana indawo "yokhuseleko". Kwezinye izixhobo icandelo "lokhuseleko" linxulunyaniswa "nobumfihlo".
Kwicandelo lokhuseleko uza kubona amaqela amabini amakhulu. "Ukhuseleko lokungena" kunye "neDatha kunye neMbali".
Ukhuseleko kunye nokungena
Kule nxalenye, uya kufumana amanye amacandelo amathandathu, apho uya kuqala khona ukuqwalasela ukhuseleko lweakhawunti yakho:
Iphasiwedi: Apha ungatshintsha iphasiwedi yeakhawunti yakho. Kuya kufuneka ufake ipassword yakho ngoku kwaye ufake ipassword entsha kabini. Ekugqibeleni, kuya kufuneka ucinezele u- "Kwenziwe". Uyakufumana ukhetho "ukuba uyilibele iphasiwedi yakho", xa kunokwenzeka yenzeke kuwe.
Umsebenzi wokungena: Kule nxalenye uza kubona iibhokisi zokungena, ukuze kamva, ikubonise indawo ekuyo ngqo, kunye nolungelelwaniso kunye neemephu. Ukongeza ekunikezeni ukhetho lokwamkela nokwala nokuba ungene ngemvume okanye hayi.
Ulwazi lokungena lugciniwe: Olu khetho lusetyenziselwa ukugcina naluphi na ulwazi lokungena kwiakhawunti yakho. Oko kukuthi, igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha leakhawunti yakho.
Amanyathelo amabini okuqinisekisa: Kweli candelo ungaqwalasela ukungqinisisa iakhawunti yakho ngomyalezo obhaliweyo okanye imeyile ngekhompyutha.
Iimeyile ze-Instagram: xa ungena uya kuba nakho ukufunda ii-imeyile othunyelwe ngu-Instagram ngalo lonke ixesha onalo ungene
Idatha kunye nembali
Kweli candelo uza kufumana amacandelo amane okhuseleko, angala:
Idatha yokufikelela: Ukufikelela kwidatha yakho, iqonga liya kukucela ukuba ufake igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha. Nje ukuba ugqibile, iya kukubonisa lonke ulwazi malunga neakhawunti yakho, ukusukela kumhla wokuyilwa ukuya kumdla wentengiso.
Khuphela idatha: Ukukhuphela idatha yeakhawunti yakho, kwiimeko apho ufuna ukuzigcina, ngaphambi kokuqhubeka nokuzikhubaza.
Iiapps kunye neewebhusayithi: Apha uya kuba nakho ukwazi ukuba zeziphi izicelo oziqale kwiseshoni ye-Instagram. Ukuba bayasebenza, iphelelwe okanye icinyiwe.
Imbali yokukhangela: ukuba uthatha isigqibo sokucima zonke iifayile ze irekhodi kukhangelo lwakho.
1 Fumana icandelo lokhuseleko
2 Ukhuseleko kunye nokungena
3 Idatha kunye nembali